UTM ulungelelanisa igridi usebenzisa i-CivilCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/UTM idibanisa igridi usebenzisa i-CivilCAD
Kutshanje wathetha nabo malunga KwiCACC, isicelo esisebenza kwi-AutoCAD kunye ne-Bricscad; ngeli xesha ndifuna ukukubonisa indlela yokuvelisa itafile yokulungelelanisa, nje njengoko sibonile ukuba kwenziwa nge-Microstation Geographics (Ngoku iMephu yeBentley). Ngokwesiqhelo ezi zinto Iiprogram ze-GIS zinalo ngezinga eliphezulu, kodwa kwinqanaba le-CAD liyakwazi, kuba nangona zivelisiwe kufuneka zenziwe ngendlela engavumelekanga, ilahlekelwe yintsholongwane kwaye idinga ukuhlelwa kohlelo lokuhlela.
Zimbini iindlela onokukhetha kuzo kwi-CivilCAD: ii-UTM Coordinates kunye neJografi.
1 I-Georeferencing ifayili ye-CAD.
Njengoko sinakho kuchaziwe ngaphambili, into yokuba umlinganiselo ungaphakathi UTM izilungiso akuthethi ukuba i-georeferenced, kuba ulungelelaniso olufanayo luphindaphindiwe kwezinye iindawo, ukwenzela ukuba kufuneka uchaze kwindawo osebenza kuyo.
Oku kwenziwa nge: CivilCAD> Guqula izinto eziguquguqukayo.
Ngendlela efanayo, ukuze sikwazi ukuvelisa ukulungelelaniswa kweendawo, kufuneka sichaze iipropati ze-ellipsoid, ukuba ngaba zihluke kwi-GRS80 / WGS84 sele isilungiselelwe:
Ububanzi bebala (amazinga), ngokuqhelekileyo i-6
Lo buxoki, ngokuqhelekileyo i-500,000
Umgangatho wezinga eliphakathi
Umda we-meridian ephakathi, lo yi-meridiya ephakathi kwendawo
2 Grid Coordinate Grid
Ngenxa yoko, kukhethwe kwimenyu ye-CivilCAD, i-reticle uze u-UTM; okanye umyalelo ngesandla -RETUTM, ngoko ukungena.
Kumgca wokuyalela, umyalezo oza kukhetha ibhokisi yomdla wethu uyavela, emva koko kukhethwe iigumbi ezimbini zelebhile. Kuyacetyiswa ukuba i-snap isebenze, ukuze imigca ihambelane ngqo nomda, i i-snap isebenze okanye ivalwe ngokusebenza kwekhibhodi yeF3.
Emva koko umyalezo ubonakala ukuba igridi inomdla kangakanani kuthi; Kule meko ndiza kukhetha i-200. Kwaye apho sinayo, elula, ngaphandle kwengxaki enkulu kodwa ngeendlela ezimbalwa njengoko iMicrostation isenza.
Ukutshintsha umbala wesicatshulwa okanye i-crossheads, yenziwe yatshintsha kuyo iziqendu kuveliswe kule nkqubo; I-CVL_RETU TM kunye neCVL_RET_TX. Ukuze ungangcolisi i- imodeli, oku kufuneka kwenziwe kwi Kuluhlu.
3 Iingqungquthela zeendawo zokudibanisa
Kule nto, sikhetha ukhetho lwesibini, okanye umyalelo -RETGPS kwaye siphendula kwinto esiyicelayo (Umgama phakathi kwemilinganiselo ngemizuzwana)
Ukutshintsha ubungakanani bombhalo, kwenziwa nge: CivilCAD> Umbhalo> Chaza ubude beetekisi.
I-cosillas elula, oko Civil3D Ndimele ndenze ngaphandle kokubuya okukhulu.
I-CivilCAD ayikho enye i-Civil3D.
Into endiyenzile nge-CivilCAD, mhlawumbi ayinakwenziwa nge-Civil3D.
Ndikuxolele ukungafezeki.Ndizokuxabisa xa unokundinceda. Ndine-Auto Cad 2014 kwaye ngaphandle kwe-Civil 3d, ke imiyalelo oyibonisayo kwi-civil cad eqhotyoshelwe kwi-Auto Cad ayihambelani nam. Ndiyabulela kwangoko.
Andazi ukuba ndingaqwalasela njani iiparameter zokwenza iigridi kulungelelwaniso lwejografi ... isebenza kuphela kum ngokulungelelanisa i-utm ... xa ndikhetha iigridi zeGPS, indenzela igridi, kodwa kude nomzobo, owenziwe ngolungelelwaniso lwe-utm, ngokweendawo ezihambelanayo ekule meko yi-HUSO 18 emazantsi (CHILE), kumbindi we-meridian -75. Andazi ukuba ndifuna ukumisela enye ipharamitha. Ndingavuya ukuba ungandinceda, kubonakala kum njengesicelo esiluncedo.
Ndiyabulela kwangaphambili. Ukubulisa
Ewe, oko kuphelelweyo kwe-CivilCAD, kuba yonke into eyenza ayinamandla okanye inokusingathwa njenge-template.
Into endiyenzile yakha ibhloko le-crosshead, kunye nenqaku lokuvela kumzila, kwaye kunye nomyalelo weqela uyayiphinda; Ngoko ukuba ndiprinta ubungakanani andicinga ukuba ndiyibuyisela kwakhona kwaye bonke batshintsha ngexesha elinye.
Kukho isimiso se-lisp se-AutoCAD, esenza into efanayo ngaphandle kokusebenzisa i-CivilCAD
Ndiza kubenza njani ubungakanani begridi? .... Ndivelisa izicwangciso kwizikali ezahlukeneyo, ke ngoko kufuneka nditshintshe ubungakanani begridi.Ngaba oku kunokwenziwa? kuba kufuneka ndihlela nganye nganye
mbulela ngoncedo lwakho !!!